ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ ကော်လာဂျင် သောက်လို့ရလား...................... - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 25/01/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကော်လာဂျင်ဆိုတာက ဆံသားတွေကို ထူထဲစေတယ်။ အရေပြားကိုတင်းရင်းစေတယ်ဆိုတဲ့ အာနိသင်ရှိတယ်ဆိုတာကို သိထားပြီးသားနော်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းတာကြောင့် အသားအရေက ကြည်လင်လှပနေသလို ဆံသားကလည်း နက်မှောင်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဒီလိုကာလမှာရော ကော်လာဂျင်က လိုဦးမှာလား……. သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ပုံမှန်ထက် အာဟာရ ပိုမိုရရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုကာလမှာ ပြည့်ဝဖို့အလိုအပ်ဆုံးက ပရိုတင်းပါ။ ပရိုတင်း ပြည့်ဝမှ မေမေရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာမှာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မေမေ အများစုက ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပြည့်ဝအောင်ဆိုပြီး အားဆေးတွေ သောက်ရပါတယ်။ ဒီလိုသောက်သုံးပေးတာက မိခင်ရော ဘေဘီလေးကိုပါ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေထဲမှာ ကော်လာဂျင်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကော်လာဂျင်ကို အစားအစာတွေကနေတဆင့်လည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကော်လာဂျင်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သောက်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း သောက်သုံးလို့ ရသလို အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေလည်း ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို ကော်လာဂျင်ပမာဏ ၇၀ ဂရမ်ကနေ ၁၀၀ ဂရမ် ထိသောက်သုံးလို့ ရပါတယ်။ အရေးကြီးတာ တစ်ချက်က သောက်သုံးမယ့် ကော်လာဂျင် အမျိုးအစားက သင့်တော်မှုရှိရဲ့လားဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ အရင်တိုင်ပင်ကြည့်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကော်လာဂျင် သောက်သုံးပေးတာက
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကော်လာဂျင်သောက်သုံးတာက မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါ ခံစားရနိုင်တဲ့ တင်ပါးဆုံ ကြွက်သား အားနည်းတာ၊ ဗိုက်ကြွက်သားနဲ့ သားအိမ်ကြွက်သား အားနည်းတာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ကော်လာဂျင် သောက်သုံးပေးတာက တင်ပါးဆုံ၊ ဗိုက်ကြွက်သားနဲ့ သားအိမ်ကြွက်သားတွေက တစ်ရှူးတွေကို အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အနာကျက်မြန်စေဖို့ အထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ကော်ာဂျင် သောက်တာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာရော ကလေးမွေးဖွားချိန်မှာပါ မေမေတို့ကို ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နိုင်စေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရတော့ ကော်လာဂျင်သောက်ပေးတာက မေမေတို့ကို အိပ်ဆေးမလိုဘဲ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။ ကော်လာဂျင်မှာပါတဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်က ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေနိုင်ပြီး အိပ်ရေးမဝတာကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာမျိုး မခံစားရစေဖို့ အထောက်အကူပေးပါတယ်။
ကော်လာဂျင်သောက်ပေးတာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ မီးဖွားပြီးစ မိခင်တွေအတွက် အရေးပါတဲ့ သိုင်းရွိုက်စနစ် ကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း ထွက်ရှိမှုကို ကောင်းမွန်စေဖို့လည်း အထိရောက်ဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ကော်လာဂျင်ရဲ့ နောက်ထပ် အားသာချက်တစ်ရပ်က ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို ဟန်ချက်ညီစေတာပါ။ ကော်လာဂျင်မှာပါတဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်က ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို ကောင်းမွန်စေသလို သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါသေးတယ်။
ကော်လာဂျင်မှာပါတဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်က အူနံရံတွေကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်စေဖို့ ထောက်ကူပေးသလို ထိခိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလည် ပြန်လည် ကျန်းမာစေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ အစာခြေစနစ် ကျန်းမာစေတာက ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ကော်လာဂျင် သောက်သုံးပေးတာက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေနဲ့ မီးဖွားပြီးတဲ့ မေမေတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ အရိုးအဆစ်တွေ နာကျင်တာကို သက်သာစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
အသားအရေကျန်းမာစေတယ်။ အကြောပြတ်ရာတွေကို သက်သာစေတယ်
ကော်လာဂျင်က အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး အရေးအကြောင်း ကင်းစေသလို အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ အကြောပြတ်ရာတွေကို သက်သာစေဖို့အတွက်လည်း ကော်လာဂျင်ကို သုံးစွဲပေးလို့ ရပါတယ်။
Can you take collagen supplements when pregnant? https://www.motherandbaby.co.uk/pregnancy/collagen-in-pregnancy Accessed Date 11 January 2021
IS COLLAGEN SAFE DURING PREGNANCY AND BREASTFEEDING? https://sprooslife.com/is-collagen-safe-during-pregnancy-and-breastfeeding/ Accessed Date 11 January 2021